Galaxy Tab S2 (2016, 8.0") | SM-T719YZWEXSP | Samsung Myanmar
အားလုံး Tablets /
Galaxy Tab S2 (2016, 8.0")
Galaxy Tab S2 (2016, 8.0")ဖြန့်ရန်
"ပေါ့ပေါ့ပါးပါး SUPER AMOLED Display SideSync 4.1 ဖြင့် အပြတ်အတောက်မရှိ ချိတ်ဆက်မှု"
Exceptionally Light and Slim
Galaxy Tab S2 (2016, 8.0”) 4G+ ဖြင့် အရင်ကထက် ပိုမိုလိုက်လျောညီထွေရှိမှုကို ခံစားလိုက်ပါ။၎င်းက ပေါ့ပါးမှုဆိုသည်ကို အဓိပ္ပာယ်ထပ်မံဖွင့်ဆိုလိုက်ပြီး ကြော့ရှင်းသပ်ရပ်လှပမှုရှိသည့် profile ကြောင့် အလွယ်တကူကောက်ကိုင်ပြီး အိတ်ထဲထည့်ကာ သင်ကြိုက်သည့်အချိန်တွင် ကြိုက်သည့်နေရာကို အဆင်သင့်သယ်သွားနိုင်ပါသည်။
Galaxy Tab S2 (2016, 8.0”) 4G+ ၏ 8MP ကင်မရာနှင့် f1.9 မှန်ဘီလူးတို့ကိုအသုံးပြု၍ အလင်းရောင်အားနည်းနေသည့်တိုင်အောင် ပိုမိုတောက်ပပြီး ပြတ်သားသည့် ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗီဒီယိုများအား ရိုက်ကူးနိုင်ပါသည်။ ၁၀၀၀၀၀ : ၁ ( တစ်သိန်းပုံရဲ့ တစ်ပုံ) အရောင်ခြားနားမှု ပမာဏ(high contrast ratio) ဖြင့် ဤ tablet ၏ SUPER AMOLED screen တွင် သင်၏ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများကို အလွန်ကြည်လင်ရှင်းလင်းစွာ ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Galaxy Tab S2 (2016, 8.0”) ဖြင့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ်ယောက်ကဲ့သို့ တစ်ပြိုင်တည်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ Photo Gallery ကို ကြည့်ရင်း၊ အီးမေးလ်ပြန်ရင်း သို့မဟုတ် အင်တာနက်စာမျက်နှာဖတ်ရင်း HD ရုပ်ရှင်များကို ကြည့်နိုင်ပါသည်။ ချောမွေ့စွာ တစ်ပြိုင်တည်းလုပ်ဆောင်အသုံးပြုနိုင်စွမ်း (multitasking) အတွက် Multi Window* (Split View, Pop Up View) ဖြင့် app များကို ဖွင့်ထားနိုင်ပါသည်။
*ရွေးချယ်ထားသော app များအတွက်သာ
စာအုပ်တစ်အုပ် သို့မဟုတ် ဘလော့ဂ်များကို သက်တောင့်သက်သာအကောင်းဆုံးရှိမှုဖြင့် ဖတ်ရှုလိုက်ပါ။ သင် သက်တောင့်သက်သာစာဖတ်နိုင်ရန်အတွက် Galaxy Tab S2 (2016, 8.0”) 4G+ တွင် screen ပေါ်ရှိ လစ်လပ်နေသောနေရာအားလုံးကို အသုံးချသည့် ၄:၃ (လေးပုံသုံးပုံ) ရုပ်ပုံဖော်ပြနိုင်စွမ်းပမာဏပါရှိပါသည်။
Take Productivity Further
မြန်ဆန်စွာစာရိုက်နိုင်ခြင်းနှင့် အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်သော application များဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်လိုက်ပါ။ အချိန်တိုအတွင်းအလုပ်များကို ပြီးမြောက်စေသည့် Bluetooth® Keyboard ပါသောGalaxy Tab S2 (2016, 8.0”) 4G+၏ Book Cover သည် စာရိုက်နှုန်းနှင့် မှန်ကန်တိကျမှုကိုများစွာ မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ သင်နှင့် ရင်းနှီးသည့် PC စတိုင် ပတ်ဝန်းကျင်တွင်လည်းMicrosoft® Office® applicationများကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Bluetooth သည် Bluetooth SIG, Inc ၏ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ Microsoft နှင့် Office သည် Microsoft ကုမ္ပဏီများအဖွဲ့၏ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သည်။
Seamless Connection with SideSync 4.0
အဆင်ပြေချောမွေ့ရေးနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများကိုအမြင့်ဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ SideSync 4.0 ဖြင့်များပြားသော device များကြားတွင် ချောမွေ့စွာလွှဲပြောင်းနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏ စမတ်ဖုန်းမှ ဖုန်းအဝင်များနှင့် စာများကို သင့် Galaxy Tab S2 (2016, 8.0”) 4G+ ဖြင့် တိုက်ရိုက်လက်ခံရရှိပြီး ပြန်လည်ဖြေဆိုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Device တစ်ခုမှ နောက်တစ်ခုသို့ file များကို drag and drop လုပ်ပြီး ပို့ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
8.0" (203.1mm) Size (Main Display)
CMOS 8.0MP Main Camera - Resolution
267 Weight (g)
4000 Standard Battery Capacity (mAh)
Up to 14 Video Playback Time (Hours)
1.8GHz, 1.4GHz CPU Speed
CPU Speed 1.8GHz, 1.4GHz
Size (Main Display) 8.0" (203.1mm)
Rear Camera - Resolution CMOS 8.0MP
Front Camera - Resolution CMOS 2.1MP
4G FDD LTE B1 (2100MHz), B2 (1900MHz), B3 (1800MHz), B4 (AWS), B5 (850MHz), B7 (2600MHz), B8 (900MHz), B17 (700MHz), B28 (700MHz)
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4+5GHz), VHT80 MIMO
Color - / BLACK
Dimension (HxWxD, mm) 198.6 x 134.8 x 5.6
Weight (g) 267
Talk Time (3G WCDMA) (Hours) Up to 22
Find My Mobile ကို အသုံးပြုနည်း
Find My Mobile ကို အသုံးပြုနည်းsee the answer
Galaxy Tab S2 (2016, 8.0”)
Galaxy Tab S2 (2016, 9.7")
Size (Main Display) 9.7"
Memory - Actual user-accessible internal storage is less than specified total memory due to operating system, software, and other built-in applications, and may vary after software updates/ upgrades.
Battery - Dependent on network, SIM card, usage and battery condition.
Note: Certain features, services and applications are dependent on network connectivity and may not be available in all coverage areas. Additional data charges may apply. Specifications are accurate as at time of publish and are subject to change without prior notice.
Bluetooth isaregistered trademark of Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks herein is under license. Google Play, Android, Google and other marks are trademarks of Google Inc. Microsoft, Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, OneNote, Skype and ActiveSync are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Wi-Fi and Wi-Fi Direct are registered trademarks of Wi-Fi Alliance. All other company, product and service names mentioned herein are marks, trademarks, registered trademarks or service marks of the respective owners.
Screen images are simulated and for illustration purposes only. ©2016 Samsung Electronics Co. Ltd